ဗြိတိန်နိုင်ငံမှအသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်အတွင်းရှိလိင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက် (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
ဒီလေ့လာမှုက 16-21 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး (2010-2012 ကနေ Data) အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများ၏အောက်ပါနှုန်းထားများအစီရင်ခံ:
အထက်ပါနှုန်းထားများများမှာ မတိုင်မီ International ၏ထွန်းမှအစီရင်ခံသည်များထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားt ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အသက် ၄၀ နှစ်အောက်အမျိုးသားများအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းများကိုတသမတ်တည်းဖော်ပြခဲ့သည် ယခုနှစ်2မတိုင်မီပြုမိလေ့လာမှုများအတွက် 2000% ။ အဆိုပါ 1940s ခုနှစ်, Kinsey အစီရင်ခံစာနိဂုံးချုပ် ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့ခဲ့တာကြောင့် 1 ထက်လျော့နည်း% 30 နှစ်ပေါင်းထက်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများတွင်။ ယောက်ျား 21 များအတွက်ပညာရေးနှုန်းထားများ may% 1 ဖွယ်ရှိပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပါသည်။ ဤအ 6-8 နှစ်အရွယ်နှုန်းထားများဒီတိကျရောက်နေတယ်ဆိုရင် ယောက်ျားအသက်အရွယ် 400-800 များအတွက်ပညာရေးနှုန်းထားများအတွက်တစ်ဦး 16% -21% တိုးညွှန်ပြမယ်လို့! ထိုလေ့လာချက်အရဤလေ့လာမှုနှုန်းသည်လူငယ်များ (အထူးသဖြင့် ED နှုန်း) နှင့် ပတ်သက်၍ အခြားမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုများထက်သိသိသာသာနိမ့်သည်။ အသေးစိတ်များနှင့်လေ့လာမှုများအတွက်ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုကြည့်ပါ။ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။
သင်တန်းသားများကိုအိမ်တွင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည့်အင်တာဗျူးသူတစ် ဦး မှ ပိုမို၍ အရေးကြီးသည့်မေးခွန်းများအတွက်ကွန်ပျူတာဖြင့်ကူညီသည့်မျက်နှာနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်နှင့်ကွန်ပျူတာဖြင့်အထောက်အကူပြုသည့်မိမိကိုယ်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (CASI) ကို သုံး၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။
အိမ်တွင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ဆယ်ကျော်သက်များသည်အပြည့်အဝလာမည့်ထက်နည်းလိမ့်မည်ဟုအတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်။ လတ်တလောလေ့လာမှုများအရလူငယ်များတွင်ပိုမိုများပြားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများသည်အမည်မသိအွန်လိုင်းစစ်တမ်းများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကနေဒါဆယ်ကျော်သက်အပေါ် 2014 လေ့လာမှု 53.5-16 အသက်ယောက်ျား၏ 21% ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာပြလက္ခဏာတွေရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (27%), နဲ့အော်ဂဇင် (24%) နှင့်အတူပြဿနာများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, အသုံးအများဆုံး (11%) ဖြစ်ခဲ့သည်။
၂။ လေ့လာမှုက ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သိသာထင်ရှားသည့်မြင့်တက်မှုကိုအစီရင်ခံသည့်လေ့လာမှုများသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါအသုံးပြုသောအခြားလေ့လာမှုအတော်များများ 3) IIEF-5 ရိုးရှင်းသောဆန့်ကျင်အဖြစ်တစ်စကေးအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအကဲဖြတ်ရန်အရာသို့မဟုတ် IIEF-6, ဟုတ်ကဲ့ or အဘယ်သူမျှမ (အတိတ်3လအတွင်း) လက်ရှိစက္ကူအတွက်အလုပ်လုပ်။
Kirstin R. Mitchell က, Ph.D ဘွဲ့ကိုa, b, ,ရေဗက္ကာ Geary, Ph.D ဘွဲ့ကိုc, စင်သီယာဂရေဟမ်, Ph.D ဘွဲ့ကိုd, Soazig Cliftonc, ကက်သရင်းအိပ်ချ်မာ, Ph.D ဘွဲ့ကိုc, ရုသသည် Lewis က, Ph.D ဘွဲ့ကိုa, e, Wendy Macdowall, M.Sc.a, ဂျက်စီကာ Datta, M.Sc.a, အန်းအမ်ဂျွန်ဆင်, MDc, ကေးကကောင်းစွာ, FRCOGa
လူငယ်များ၏လိင်မှုအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောကူးစက်ရောဂါများနှင့်ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသောကိုယ်ဝန်စသောအန္တရာယ်ရှိသောရလဒ်များကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်မှုအပေါ်အဓိကထားသည်။ ကျယ်ပြန့်သောရှုထောင့်၏အကျိုးကျေးဇူးကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းအခြားလိင်ဆိုင်ရာကဏ္ function၊ အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်အလွန်နည်းပါးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူ ဦး ရေ၏လိင်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများပြန့်ပွားမှုနှုန်းကိုတိုင်းတာခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်လူငယ်များအားလိင်မှရှောင်ရှားခြင်းအားဖြင့်ဤကွာဟမှုကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာ-ကူညီ Self-အင်တာဗျူးတွေကို အသုံးပြု. : ဗြိတိန်မှာ3အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများတစ် Cross-Section stratified ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာစစ်တမ်း (Natsal-15,162) (57.7% တုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည်) ။ ဒေတာကို 1875 (71.9%) ကနေလိင်တက်ကြွ လာ. , (517%) 18.7 လိင်မလှုပ်မရှား, 16-21 နှစ်ပေါင်းအသက်သင်တန်းသားများ။ ဆောင်ရွက်ချက်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုကို (Natsal-SF) ၏အတည်ပြုအတိုင်းအတာအနေဖြင့်တစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။
လိင်မှုဆိုင်ရာတက်ကြွသောအသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်အကြားပါဝင်သူများအနက်အမျိုးသား ၉.၁% နှင့်အမျိုးသမီး ၁၃.၄% သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၃ လနှင့်အထက်ကြာသည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အမျိုးသားများအကြားတွင်အထွတ်အထိပ်သို့အလျင်အမြန်ရောက်ရှိနေခြင်း (၄.၅%) နှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရန်အခက်အခဲ (၆.၃%) ။ အမျိုးသားများ၏သုံးပုံတစ်ပုံ (၃၅.၅%) နှင့်အမျိုးသမီး ၄၂.၃% သည်ပြproblemနာကိုအစီရင်ခံသောကြောင့်အကူအညီလိုအပ်သော်လည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရင်းမြစ်များမှရှားပါးသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလိင်မဆက်ဆံသောသူများအနက် ၁၀% မျှသောလူငယ်များနှင့်အမျိုးသမီးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကြောင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုရှောင်ကြဉ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
စိတ်ပျက်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာတွေလိင်တက်ကြွလူငယ်များ၏တွင်ရှိသောလူနည်းစုများကသတင်းပေးပို့ထားပါသည်။ ပညာရေးလိုအပ်ပါသည်နှင့်အကြံပေးခြင်းရာသက်ပန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများသို့တိုးတက်အသိပညာမရှိခြင်း, စိုးရိမ်စိတ်, အရှက်ကွဲခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့, မရရှိနိုင်ပါဖြစ်သင့်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာတွေ;
ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေဖြင့်ဤသည်တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်ဒေတာစိတ်ပျက်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာများကိုလူငယ်များ (အသက် 16-21 နှစ်) အတွက်အဆန်းမဟုတ်ပြသည်။ လိင်ပညာရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများအတွက်, ပညာရှင်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်လူငယ်များဟာသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လူငယ်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူကိုပညာရှင်ဆန်သောစိတ် ၀ င်စားမှုမှာလိင်မှုအန္တရာယ်များ၊ အဓိကအားဖြင့်မစီစဉ်ထားသောကိုယ်ဝန်နှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှုကိုတားဆီးရန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ,  နှင့်  နှင့် ပို. ပို. , nonconsensual လိင်။ အရည်အသွေးအလုပ်လူငယ်များမိမိတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာထိခိုက်ကိစ္စများနှင့်အတူအညီအမျှစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်သို့မဟုတ်ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်နိုင်သည် သူတို့မကြိုက်ပါလှုပ်ရှားမှုများသဘောတူသို့မဟုတ်နာကျင်ရှာတွေ့မှလူမှုရေးဖိအားမျိုးမခံစားရ ကခက်ခဲစံပြထက်လျော့နည်းဖြစ်ကြောင်းအတွေ့အကြုံများမှဝန်ခံစေစံချိန်စံညွှန်းဆန့်ကျင်, ဒါမှမဟုတ်ရုန်းကန်  နှင့် .
လှုံ့ဆော်မှု၊ လိင်ဆိုင်ရာလက္ခဏာနှင့်လိင်ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသော်လည်းလူငယ်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုရှိနိုင်သည့်ပြwithနာများကိုလူသိနည်းသည်။ အကြောင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြfunctionနာများသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်သည်ဟုယူဆသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Sexual function ဆိုသည်မှာတစ် ဦး တစ်ယောက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု (သို့) လိင်အပျော်အပါးကိုခံစားနိုင်သည့်စွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်သည်  နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြproblemsနာများသည်ဤနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်သောသူတို့ဖြစ်ကြသည်။ လူ ဦး ရေပျံ့နှံ့မှုလေ့လာမှုတွင်လိင်မှုကိစ္စပြproblemsနာများသည်အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အကြားပါဝင်သူများဖြစ်သော်လည်းအသက် ၂၉ နှစ်အထိကျယ်ပြန့်သောအသက်အရွယ်အမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။  ခဲ 24 နှစ်အောက်လူငယ်များအပေါ်တိကျတဲ့အသေးစိတ်များကို ,  နှင့် ။ အနည်းငယ်လေ့လာမှုများအစောပိုင်းလူကြီးအပေါ်အထူးအာရုံစူးစိုက်ကြ, ဤယေဘုယျအားဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုယ်စားလှယ်ဒေတာကိုသုံးကြပြီမဟုတ်  နှင့် .
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးယဘေုယအြားထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်းတိုးပွားလာအသိအမှတ်ပြုမှုရှိပါတယ်  နှင့် နှင့် WHO- အားဖြင့်ထောက်ခံသည့်ဘက်စုံချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် ", ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုတစ်ပြည်နယ်လိင်နှင့် ပတ်သက်. ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်း" တဖြည်းဖြည်းငွေကြေးရရှိမှု -is ။ လူငယ်များအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး "အပြုသဘောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလိင်ပံ့ပိုးမှုများကိုသာအဖြစ်ဆိုးရွားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များရှောင်ရှားဖို့ဆိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုများ၏ဝယ်ယူ" ပါဝင်သည် ။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းအသွင်သဏ္ဌာန်မှအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်စွန့်စားမှု-လျှော့ချရေးအလေ့အထများနှစ်ဦးစလုံးနှင့်စပ်လျဉ်းကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်  နှင့် ။ ဥပမာအားဖြင့်လူငယ်လူတို့တွင် erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုခုခံဖို့အထောက်အကူပြခဲ့ကြ  နှင့်ကိုက်ညီမှုအသုံးပြုမှုမှ ။ မြီးကောင်ပေါက်၌ကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးထိုကဲ့သို့သောကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ abstinence အဖြစ်အန္တရာယ်လျော့ပါးရေးအပြုအမူတွေ, နှင့်ဆက်စပ်နေသည် နှင့်လူကြီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြောင်းပြန်အန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်နေသည် ။ အပျော်အပါးကာကှယျစောငျ့ရှောကျကြောင်းကြားဝင်ထို့ကြောင့်ဤကဏ်ဍကိုလျစ်လျူရှုသောသူတို့ထက် ပို. ထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည်  နှင့် ။ လူငယ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ်အချက်အလက်များ၏လက်ရှိမရှိခြင်းဘက်စုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဖြေရှင်းရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်သုခချမ်းသာလူငယ်များကိုပစ်မှတ်ထားကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်မှလျော့နည်းသက်ဆိုင်ရာသောယုံကြည်ချက်အား  နှင့် .
ကျနော်တို့ယခင်ကလိင်သဘောထားနှင့်လူနေမှုပုံစံ၏တတိယအမျိုးသားစစ်တမ်း (Natsal-16) မှဒေတာများသုံးပြီးလူကြီးများအသက် 74-3 နှစ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာများ၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၆ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်အတွင်းရှိလူငယ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုပြonနာများ (စိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်စေသောအရာများအပါအ ၀ င်)၊ လူတစ် ဦး ၏လိင်ဘဝအကြောင်းကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပြbecauseနာများကြောင့်လိင်မှုကိစ္စရှောင်ရှားခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ဆိုင်ရာကွာခြားချက်ကိုဖြေရှင်းရန်ဤအချက်အလက်အတူတူပင်အသုံးပြုသည်။ ဗြိတိန်မှာ။
Natsal-16 တွင်အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်အတွင်းပါဝင်သူများ၊ ဗြိတိန်တွင် ၁၆-၇၄ နှစ်ရှိအမျိုးသား ၁၅,၁၆၂ ယောက်တို့၏စစ်တမ်းကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်သြဂုတ်လအတွင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစောပိုင်းလူကြီးများအပေါ်အာရုံစိုက်သည်။ လူငယ်များသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်အလေ့အကျင့်များသို့“ အခြေချခြင်း” မတိုင်မီလိင်အလုပ်အကိုင်များ၏ကာလနှင့်အစောပိုင်းအဆင့်များ။ ကျနော်တို့နမူနာနမူနာယူနစ်အဖြစ်ရွေးချယ်ထားသည့်နမူနာဘောင်နှင့်စာပို့သင်္ကေတကဏ္sectorsများအဖြစ် (UK = 21) အဖြစ် multistage, ပြွတ်နှင့် stratified ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာဒီဇိုင်းကို, ဗြိတိန်စာတိုက်သင်္ကေတလိပ်စာဖိုင်နှင့်အတူအသုံးပြုခဲ့သည်။ မူလတန်းနမူနာယူနစ်တစ်ခုစီတွင်လိပ်စာ ၃၀ သို့မဟုတ် ၃၆ ခုကိုကျပန်းရွေးချယ်ပြီးအိမ်ထောင်စုတစ်ခုစီတိုင်းတွင်အရည်အချင်းပြည့်မီသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ် ဦး ကိုကွန်ယက်ကို အသုံးပြု၍ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ မတူညီသောရွေးချယ်မှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုချိန်ညှိနိုင်ရန်တွက်ချက်ပြီးနောက်3ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းကိန်းဂဏန်းများအရ Natsal-15,162 နမူနာသည်ဗြိတိသျှလူ ဦး ရေ၏အများအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုခဲ့သည် .
သင်တန်းသားများကိုပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့မေးခှနျးတှေအတှကျကွန်ပျူတာ-ကူညီမှမကျြနှာကိုမကျြနှာကို-နှင့်ကွန်ပျူတာ-ကူညီ Self-အင်တာဗျူး (CASI) ၏ပေါင်းစပ် အသုံးပြု. , လေ့ကျင့်သင်ကြားအင်တာဗျူးအားဖြင့်အိမ်မှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ အင်တာဗျူးပစ္စုပ္ပန်နှင့်သင်တန်းသားများ CASI ပြီးစီးခဲ့ပေမယ့်အဖြေကိုကြည့်ရှုရန်မပြုခဲ့စဉ်ကကူညီမှမရရှိနိုင်ခဲ့။ အဆိုပါ CASI အပိုင်းအဆုံးမှာအဖြေကိုကွန်ပျူတာသို့ "သော့ခတ်" တို့အင်တာဗျူးဖို့လက်လှမ်းမမှီခဲ့သညျ။ အဆိုပါအင်တာဗျူးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်နာရီကြာနှင့်သင်တန်းသားများကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်၏လက္ခဏာသက်သေအဖြစ်£ 15 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းကိုတူရိယာနှံ့နှံ့စပ်စပ်သိမြင်မှုစမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်လေယာဉ်မှူးခံယူ .
အဆိုပါခြုံငုံတုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည် 57.7 အားလုံးရထိုက်ခွင့်လိပ်စာများ (64.8-16 နှစ်ပေါင်းအသက်သင်တန်းသားများအကြား 44%) ၏% ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှုန်း (အဆက်အသွယ်စစ်တမ်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူသဘောတူခဲ့ဘယ်မှာအရည်အချင်းပြည့်မီလိပ်စာများမှာဖြေဆိုသူအချိုးအစား) 65.8% ဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်တမ်းနည်းစနစ်များ၏အသေးစိတ်တခြားနေရာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်  နှင့် ။ Natsal-3 အင်တာဗျူးအဘို့ပါးစပ်သဘောတူညီခကျြပေး Oxfordshire သုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှအေပါဝင်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမိတ်ဖက်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောလိင်အင်္ဂါမှလိင်အင်္ဂါ၊ ပါးစပ်သို့မဟုတ်စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံသူများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွမှုဟုမှတ်ယူပြီး၎င်းတို့သည်အတိတ်ကာလက ၃ လနှင့်အထက်ကြာရှည်သည့်လိင်ဘဝပြသနာရှစ်ခုစာရင်းရှိခဲ့ဖူးပါသလားဟုမေးမြန်းခဲ့သည် နှစ်။ ၎င်းတို့တွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစိတ်မ ၀ င်စားခြင်း၊ လိင်မပျော်မွေ့ခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံစဉ်စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ကာယပိုင်းနာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့ရခြင်း၊ လိင်မှုပြုခြင်း၌စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်နှိုးဆွခြင်းမရှိသလောက်၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာသို့မဟုတ်နှိုးဆွသည်ဟုခံစားရသော်လည်းအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိရန်၊ သင်လိုချင်သည်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိရန် (သင်ဆန္ဒရှိသည်ထက်)၊ မသက်မသာခြောက်သွေ့သောယောနိ (အမျိုးသမီးများအတွက်သာမေးမြန်းခြင်း) နှင့်စိုက်ထူခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အခက်အခဲရှိခဲ့သည် (အမျိုးသားများအတွက်သာ) ။ ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်၎င်းတို့ကိုထောက်ခံခဲ့သည် (ဟုတ်သည်ကိုဖြေဆိုခဲ့သည်) ထို့နောက်သင်တန်းသားများကိုပြaboutနာနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ခံစားရသနည်း (တုန့်ပြန်မှုရွေးချယ်စရာများ - လုံးဝစိတ်မသက်မသာဖြစ်ခြင်း၊ နည်းနည်းစိတ်သောကရောက်ခြင်း၊ မျှမျှတတစိတ်သောကရောက်ခြင်း၊ အလွန်စိတ်ဆင်းရဲခြင်း) ကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ သူတို့သည်အခက်အခဲနှင့်မည်မျှကြာသည်ကိုမည်မျှကြာကြာခံစားခဲ့ရကြောင်း (ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြမထားသည့်အချက်အလက်) ကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလိင်မှုကိစ္စမည်သို့ပင်ဖြစ်စေလိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသူအားလုံး (လိင်မှုအတွေ့အကြုံရှိဖူးသူများ) အားသူတို့၏လိင်ဘဝကိုခြုံငုံသုံးသပ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည် (ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူ၊ သဘောတူ၊ မတူ၊ မတူသူ၊ သဘောမတူ၊ လုံးဝသဘောမတူ) ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူခြင်း (သို့) သဘောတူခြင်းရှိသူများကိုထို့နောက်ပြtheနာများတူညီစွာတင်ပြခြင်းဖြင့်၎င်းတို့အားမည်သည့်လိင်ဆက်ဆံမှုမှရှောင်ရှားစေခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြခဲ့သည်။ နောက်ထပ်တုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်မှုများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -“ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်တစ် ဦး (သို့မဟုတ်ထိုထက်မက) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲရှိခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုများစွာကိုခွင့်ပြုခဲ့သည်။ Likert စကေးကို သုံး၍ သူတို့၏လိင်မှုဘ ၀ ကိုစိတ်သောကရောက်နေသလားသို့မဟုတ်စိတ်ပူနေသလားဆိုသည်ကိုလည်းသင်တန်းသားများကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလိင်ဘဝနှင့်ပတ်သက်သောအကူအညီများသို့မဟုတ်အကြံဥာဏ်များတောင်းခံခြင်းရှိ၊ မရှိကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမည်သည့်ရင်းမြစ်စာရင်းမှမဆို၊ ဟုတ်လျှင်ဟုတ်ကဲ့၊ လျှောက်ထားသူအားလုံးကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထိုရွေးချယ်မှုများကိုနောက်ပိုင်းတွင်မိသားစု ၀ င် / မိတ်ဆွေ၊ မီဒီယာ / မိမိကိုယ်ကိုကူညီခြင်းအဖြစ်အုပ်စုဖွဲ့ခဲ့သည် (အင်တာနက်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်နှင့်အထောက်အပံ့ဆိုဒ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အထောက်အကူပြုစာအုပ်များ / သတင်းအချက်အလက်လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ ကိုယ်ပိုင်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့များ၊ အကူအညီလိုင်း) နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များ (အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန် / မိသားစုများပါဝင်သည်) ဆရာ ၀ န်၊ လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေး / လိင်အင်္ဂါဆီးလမ်းကြောင်းဆေး / STI ဆေးခန်း၊ စိတ်ရောဂါအထူးကုသို့မဟုတ်စိတ်ပညာရှင်၊ ဆက်ဆံရေးအကြံပေး၊ အခြားဆေးခန်းသို့မဟုတ်ဆရာ ၀ န်)၊ သို့မဟုတ်မည်သည့်အကူအညီကိုမျှမရယူခဲ့ပါ။ ဤပစ္စည်းများကို Natsal-SF မှလာသည်။ ဒီနှင့်အခြားလူ ဦး ရေပျံ့နှံ့စစ်တမ်းများအတွက်အသုံးပြုရန်အထူးဒီဇိုင်းနှင့်တရားဝင်အတည်ပြုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတစ်အတိုင်းအတာ။ 17-item Natsal-SF အတိုင်းအတာကောင်းမွန်သောမထိုက်မတန် (နှိုင်းယှဉ်မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း = .963; Tucker Lewis ကအညွှန်းကိန်း = .951; အကြမ်းဖျင်း၏ဆိုလိုရင်းစတုရန်းအမှား = .064), လက်တွေ့နှင့်ယေဘုယျလူ ဦး ရေအုပ်စုများအကြားခွဲခြားနိုင်ပြီးကောင်းသောစမ်းသပ်မှုရှိပါတယ် - ယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆေးမှု (r = .72)  နှင့် .
အချက်အလက်အားလုံးကိုတွက်ချက်ရန်နှင့်အချက်အလက်အလွှာခွဲခြားရန်အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအားလုံးကို Stata (version 12; StataCorp LP, College Station, TX) ၏ရှုပ်ထွေးသောစစ်တမ်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၁၆ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်အတွင်းလိင်အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသည်။ Natsal-16 တွင်တုန့်ပြန်မှုနည်းသောအရာ (အများအားဖြင့် <21% နှင့်မကြာခဏ ၁% မှ ၃%) အနိမ့်ကျသည်၊ လိင်မှုဆိုင်ရာတက်ကြွသောပါဝင်သူများ (အင်တာဗျူးမတိုင်မီတစ်နှစ်ကအနည်းဆုံးလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကိုအစီရင်ခံသူများ) တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုပြproblemsနာများ (ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၃ လသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောကြာရှည်မှု) အစီရင်ခံခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ပြproblemနာကြောင့်အချိုးအစားကိုဖော်ပြရန်ဖော်ပြသောစာရင်းဇယားများကိုတင်ပြသည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာပြproblemနာတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသောသတင်းပေးပို့ခြင်းဖြင့်အလွှာစုံမှအရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးမှအကူအညီတောင်းခံသောအချိုးအစားကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလိင်မတက်ကြွသောသင်တန်းသားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု၊ လိင်ဘဝနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်လိင်ကိုရှောင်ရှားခြင်းမှရလဒ် ၃ ခုအတွက်ဖော်ပြချက်စာရင်းဇယားများကိုတင်ပြသည်။
72-16 နှစ်ပေါင်းအသက်အများစုမှာယောက်ျားမိန်းမတို့ (21%) ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ရှိခြင်းအစီရင်ခံဒါလိင်တက်ကြွစွာ (854 ယောက်ျားနဲ့ 1,021 အမျိုးသမီးများကို) အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ ဇယား ၁ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၃ လနှင့်အထက်ကြာသည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုပြproblemsနာရှစ်ခုမှတစ်ခုချင်းစီကိုတင်ပြသောဤလူများ၏အချိုးအစားကိုပြသသည်။ ဤအမျိုးသားများ၏သုံးပုံတစ်ပုံ (၃၃.၈%) သည်လိင်မှုကိစ္စပြoneနာတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသော (ပထမကော်လံတွင်) ခံစားခဲ့ရသည် ဇယား ၁), နှင့် 9.1% စိတ်ပျက်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြproblemနာတစ်ခု (များ) (ဒုတိယကော်လံ) အစီရင်ခံသို့မဟုတ်; ဆိုလိုသည်မှာပြoneနာတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသောယောက်ျားများကြားတွင်လေးပုံတစ်ပုံကျော် (၂၆.၉%) သည်စိတ်သောကရောက်ရသည် (တတိယကော်လံ) ။
လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုပြproblemsနာများနှင့် ၁၆-၂၁ နှစ်အရွယ်လိင်တက်ကြွသောလူငယ်များအကြားဤပြproblemsနာများအတွက်စိတ်သောကရောက်ခြင်း
တစ်ခုချင်းစီကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာအစီရင်ခံ%
တစ်ခုချင်းစီကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာအစီရင်ခံသူတို့၏အမျိုးအ% မျှမျှတတသို့မဟုတ်အလွန်ဒုက္ခရောက်နေကအကြောင်း
လိင်ဆက်ဆံစိတ်ဝင်စားမှုရှိကြ 10.50 8.1-13.5 1.40 .8-2.5 13.20 7.2-22.8
လိင်အတွက်ခံစားရှိကြ 5.40 4.0-7.3 .90 .4-1.7 16.20 8.1-29.8
လိင်စဉ်အတွင်းစိုးရိမ်ခံစားခဲ့ရ 4.80 3.5-6.6 1.50 .8-2.7 30.40 17.9-46.6
လိင်၏ရလဒ်အဖြစ်ခံစားခဲ့ရရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှု 1.90 1.1-3.4 .20 .1-.9 11.30 2.5-39.1
လိင်ကာလအတွင်းစိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ် arousal အဘယ်သူမျှမ 3.20 2.1-4.8 .80 .4-2.0 25.90 11.5-48.4
အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိအတွက်အခက်အခဲ 8.30 6.4-10.8 1.60 .8-3.0 19.20 10.5-32.4
အရမ်းလျင်မြန်စွာအထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိ 13.20 11.0-15.7 4.50 3.2-6.3 34.20 25.5-44.1
အခက်အခဲတစ်ခုစိုက်ထူစောင့်ရှောက်ခြင်း / လာပြီ 7.80 6.0-10.2 3.30 2.2-4.9 42.10 29.1-56.4
ဤအရာတစျခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြုံတွေ့ 33.80 30.2-37.7 9.10 7.2-11.4 26.90 21.5-33.0
လိင်အသက်အဘို့စည်ပင်အကူအညီနဲ့သို့မဟုတ်အကြံဉာဏ် 26.00 22.9-29.5
CI = ယုံကြည်မှုကြားကာလ။
ပိုင်းခြေကဒီကော်လံအတွက်တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဖော်ပြထားသောအဆိုပါ unweighted နှင့်အလေးချိန်ပိုင်းခြေကဤပြဿနာများ၏တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတွေ့ကြုံသောသူတို့ကိုအဘို့ဖြစ်၏။
အမျိုးသားများအကြားအထွတ်အထိပ်သို့အလျင်အမြန်ရောက်ရှိခြင်းသည်အသုံးအများဆုံးပြproblemနာဖြစ်သည် (၁၃.၂%) ။ ဤပြproblemနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောအမျိုးသားများ၏သုံးပုံတစ်ပုံကျော် (၃၄.၂%) သည်ထိုအရာနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်သောကရောက်ပြီးလိင် - တက်ကြွသောအသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်အကြားအမျိုးသားများ (၄.၅%) တွင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ စိုက်ထူခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအခက်အခဲမှာ (၇.၈%) ဖော်ပြမှုနည်းသော်လည်း၊ (၄၂.၁% အကြား) စိတ်သောကရောက်ခြင်းနှင့်ဒုတိယဒုတိယအများဆုံးတွေ့ရသည့်စိတ်ဆင်းရဲစရာပြproblemနာ (အသက်အုပ်စုရှိအမျိုးသားများ၏ ၃.၃%) သည်။ လိင်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားခြင်းကဒုတိယအများဆုံးတွေ့ရသည့်ပြproblemနာ (၁၀.၅% ခံစားခဲ့ရသည်) ဖြစ်သော်လည်းယောက်ျား၏ ၁၃.၂% ကသာထိုပြproblemနာကိုခံစားခဲ့ရပြီးခြုံကြည့်လျှင် ၁.၄% သည်စိတ်ဆင်းရဲစရာပြasနာအဖြစ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ လိင်စိတ်တက်ကြွသောလူငယ်များ ၁% သည်နာကျင်မှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု / နှိုးဆွမှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်စိတ်သောကရောက်စရာပြနာသုံးခုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ဇယား ၁ လိင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြwomenနာတစ်ခုချင်းစီကိုသတင်းပို့သောလိင်မှုဆိုင်ရာတက်ကြွသောအမျိုးသမီးများ၏အချိုးအစားနှင့်ပြtheနာကိုကြုံတွေ့နေရသူများ၏အချိုးအစားကိုပြသသည်။ ဤအမျိုးသမီးများ၏ထက်ဝက်အောက် (၄၄.၄%) သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၃ လနှင့်အထက်ကြာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုပြoneနာတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသောအခက်အခဲများကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး ၁၃.၄% ကစိတ်သောကရောက်ခြင်းပြreportedနာကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ပြoneနာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအစီရင်ခံသူများ၏သုံးပုံတစ်ပုံအောက်သာ (၃၀.၂%) သည်စိတ်သောကရောက်ခဲ့ကြသည်။
လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုပြproblemsနာများနှင့် ၁၆-၂၁ နှစ်အရွယ်လိင်တက်ကြွသောအမျိုးသမီးငယ်များအကြားတွင်ထိုပြproblemsနာများအတွက်စိတ်သောကရောက်ခြင်း
လိင်ဆက်ဆံစိတ်ဝင်စားမှုရှိကြ 22.00 19.3-25.0 5.30 4.0-7.0 24.00 18.4-30.6
လိင်အတွက်ခံစားရှိကြ 9.80 7.9-12.1 2.80 1.9-4.1 28.40 19.8-39.0
လိင်စဉ်အတွင်းစိုးရိမ်ခံစားခဲ့ရ 8.00 6.3-10.2 2.80 1.9-4.1 34.70 24.2-47.0
လိင်၏ရလဒ်အဖြစ်ခံစားခဲ့ရရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှု 9.00 7.3-11.0 3.20 2.3-4.5 35.90 26.7-46.2
လိင်ကာလအတွင်းစိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ် arousal အဘယ်သူမျှမ 8.00 6.2-10.1 2.50 1.6-3.9 31.60 21.2-44.3
အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိအတွက်အခက်အခဲ 21.30 18.6-24.3 6.30 4.9-8.2 29.70 23.4-36.9
အရမ်းလျင်မြန်စွာအထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိ 3.90 2.7-5.5 .40 .2-1.1 10.80 4.0-26.3
မသက်မသာခြောက်သွေ့တဲ့လိင်အင်္ဂါ 8.50 6.7-10.6 2.20 1.5-3.4 26.20 17.5-37.2
ဤအရာတစျခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြုံတွေ့ 44.40 41.1-47.8 13.40 11.3-15.9 30.20 25.7-35.1
လိင်အသက်အဘို့စည်ပင်အကူအညီနဲ့သို့မဟုတ်အကြံဉာဏ် 36.30 33.1-39.7
အမျိုးသမီးများအကြားအတွေ့ရများဆုံးပြproblemsနာများမှာလိင်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်း (၂၂.၀%) နှင့်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိရန် (၂၁.၃%) အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အများဆုံးတွေ့ကြုံရသည့်စိတ်ဆင်းရဲစရာပြ(နာများ (၅.၃% နှင့် ၆.၃% အသီးသီး) ။ စိတ်သောကရောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ် (၃၄.၇%)၊ လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့်ကာယပိုင်းနာကျင်မှုခံစားရခြင်း (၃၅.၉%) နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်နှိုးဆွမှုကင်းမဲ့ခြင်း (၃၁.၆%) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ၂.၈%၊ ၃.၂% နှင့် ၂.၅% အသီးသီးသောစိတ်ဆင်းရဲစရာပြproblemsနာများအတွက်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည်။ အထွတ်အထိပ်သို့အလျင်အမြန်ရောက်ရှိခြင်းသည်အနည်းဆုံးအဖြစ်ဖော်ပြခံရသည် (၃.၉%) ဖြစ်ပြီး ၁၀.၈% သောအမျိုးသမီးများသည်စိတ်ဖိစီးမှုအဖြစ်ခံစားခဲ့ရပြီးအစောပိုင်းရာသီဥတု <22.0% ကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်လိင်တက်ကြွခဲ့ကြတဲ့သူလူငယ်များအနက် 6.3 ယောက်ျား၏% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 6.8% သူတို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲ၏လိင်ရှောင်ကပြောသည်။ လုလင်တို့သည် (တွေထဲမှာပုံ 1), ရှောင်ရှားခြင်းအဘို့အအသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက်အခက်အခဲရတဲ့သို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်ခြင်းတစ်ခုစိုက်ထူလွန်းလျင်မြန်စွာတစ်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိ, သူတို့သည်ရှောင်ရှားခဲ့ကြောင်းသူအပေါင်းတို့သည်လုလင်အသီးသီး 26.1%, 24.4% နှင့် 25.1% ကဖော်ပြခဲ့သည်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်း (ခဲ့ကြသည် လိင်) ။ (ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများတွင်ပုံ 1), ရှောင်ရှားခြင်းအဘို့အအသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက်ခံစား, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, နာကျင်မှုမရှိခြင်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်း (လိင်ကိုရှောင်ရှားခဲ့ကြသောအမျိုးသမီးများ၏ 45.5% တို့ကအစီရင်ခံသည်), (အသီးသီး, 21.2%, 25.3% နှင့် 23.7% အားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည် လိင်ရှောင်ကြဉ်ခဲ့သောအမျိုးသမီးများ၏) ။
ယေဘုယျအားလိင်တက်ကြွအမျိုးသမီးများ၏ 26 လိင်တက်ကြွယောက်ျား၏% (22.9-29.5) နှင့် 36.3% (33.1-39.7) သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က၎င်းတို့၏လိင်ဘဝအကြောင်းကိုအကူအညီနဲ့ (နောက်ဆုံးအတန်းဆည်းကပ်ခဲ့ ဇယား ၁ နှင့် 2). ပုံ2လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာအတှေ့အကွုံအားဖြင့် stratified သည်ကွဲပြားခြားနားသောသတင်းရင်းမြစ်တိုင်ပင်သည့်အချိုးအစားပြသထားတယ်။ ပိုပြီးလေ့တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောပြဿနာအစီရင်ခံသူများသည်ယောက်ျားတို့အတွက် 35.5% vs. မျှပြဿနာများ (21% သတင်းပို့သူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်အကူအညီနဲ့ရှာ၏ p <.001 နှင့် 42.3% vs. 31.1%; p = .001) ။ လူငယ်များအကူအညီကိုရှာခဲ့တယျအဘယ်မှာရှိမိသားစုဝင်များနှင့်မိတ်ဆွေများမီဒီယာ / Self-အကူအညီနဲ့အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အသုံးအများဆုံးအရင်းအမြစ်ခဲ့ကြသည်။ Professional ကအကူအညီအနည်းဆုံးလေ့ဆည်းကပ်ခဲ့သည်။ တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာအစီရင်ခံလူငယ်များအနက်အမျိုးသမီးတွေယောက်ျားနဲ့ 3.6% (1.9-6.8) ၏ 7.9% (5.8-10.6) သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က၎င်းတို့၏လိင်ဘဝအကြောင်းကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်တိုင်ပင်ခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာနှင့်ကျား, မ၏အတှေ့အကွုံအားဖြင့်သူတို့ရဲ့လိင်ဘဝအကြောင်းကိုအကူအညီနဲ့သို့မဟုတ်အကြံဉာဏ်ကိုရှာသောလူငယ်များ၏အချိုးအစား။ SF လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို = ။
စုစုပေါင်း 262 ယောက်ျားနဲ့ 255 အမျိုးသမီးများကိုလိင်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြ (အစဉ်အဆက်တစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံခဲ့) ဒါပေမဲ့ (အင်တာဗျူးရှေ့တော်၌ထိုနှစ်တွင်လိင်ဆက်ဆံသတင်းပို့ဘူးဇယား ၁) ။ ရုံ (17.4%) ဒီလူ (12%) ၏ခြောက်လတကျော်နှင့်ဤအမျိုးသမီးများ၏ရှစ်အတွက်တဦးတည်းန်းကျင်ကသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝအကြောင်းကိုဒုက္ခရောက်နေဖြစ်ခြင်းအစီရင်ခံ, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများ၏ 10 တလှည့်ပတ် (10%) သူတို့လိင်ရှောင်ရှားခဲ့ကြောင်း ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်ဖြစ်စေကြုံတွေ့ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများ၏။ ဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်ရှောင်ရှားခြင်းအစီရင်ခံမကျားခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်။
လိင်အသက်, လိင်ဘဝနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ရှောင်ရှားခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ဒုက္ခဆင်းရဲသတင်းပို့ 16 နှစ်အရွယ်မှလိင်မလှုပ်ရှား 21- ၏အချိုးအစား
ဒုက္ခရောက်နေသို့မဟုတ်လိင်ဘဝစိတ်ပူ 17.40 12.8-23.4 12.00 8.3-17.2
ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်လက်တွဲဖော်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကြောင့်လိင်ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ 10.10 5.5-17.9 10.70 5.4-20.1
လိင်ဘဝကိုကျေနပ်မှု 34.60 28.5-41.3 32.20 26.2-38.7
ဤရွေ့ကားတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ် data တွေကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တဦးတည်း 10 လိင်တက်ကြွလုလင်တို့နှင့်တဦးတည်းရှစ်အတွက်လိင်တက်ကြွနုပျိုမိန်းမတို့သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်3လအတွင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတည်တံ့တဲ့စိတ်ပျက်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာသတင်းပို့တယ်။ ပြသ အမြားဆုံးအားလုံးလိင်တက်ကြွလူတို့တွင်စိတ်ပျက်စရာပြဿနာလည်းလျင်မြန်စွာ (4.5%) တစ်ဦးအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်ဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်အမျိုးသမီးငယ်များတို့တွင်အခက်အခဲအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိ (6.3%) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယောက်ျား၏တတိယကျော်နှင့် 10 အမျိုးသမီးထက်ပိုလေးတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုသတင်းပို့ပြဿနာအကူအညီနဲ့ရှာသော်လည်းမရှိသလောက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရင်းမြစ်များမှခဲ့သည်။ အင်တာဗျူးရှေ့တော်၌ထိုနှစ်တွင်လိင်ရှိခဲ့ဘူးသူတို့တွင်, 10 လုလင်တို့နှင့်အမျိုးသမီးတသူတို့တွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများ၏လိင်ကိုရှောင်ရှားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ဤလေ့လာမှု၏အားသာချက်များကြောင့်ကြီးမားတဲ့လူဦးရေ-based ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်လုလင်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာများအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားအတွက်အရေးပါသောကွာဟချက်အမှာစကားပြောကြားကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ ခြုံငုံစစ်တမ်း (57.7%) ၏တုန့်ပြန်မှုနှုန်းဘက်လိုက်မှုတစ်ခုအလားအလာအရင်းအမြစ်ကိုကိုယ်စားပြုသော်လည်း, 16 နှစ်အရွယ်မှ 44- တို့တွင်တုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည် 64.8% မှာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုတွက်ချက်ပိုမိုတင်းကြပ်မှုနည်းလမ်းများနှင့်အတူ coupled စစ်တမ်းတုံ့ပြန်မှုနှုန်းထားများအတွက်မကြာသေးမီယေဘုယျကျဆင်းမှုယခင်ကမှတ်ချက်ချကြပါပြီ, ငါတို့တုံ့ပြန်မှုနှုန်းထားများယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်အခြားအဓိကလူမှုရေးစစ်တမ်းများနှင့်အညီဖြစ်ကြောင်းလည်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြ  နှင့် ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီခကျြထဲမှာစနစ်တကျဘက်လိုက်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့, ငါတို့သည် (တွေ့မြင်ကဒီဘက်လိုက်မှုလျှော့ချရန်စစ်တမ်းလေးကိုအသုံးပြု နည်းလမ်းများ) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအပေါ် items အထိခိုက်မခံဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, Self-အစီရင်ခံဒေတာဘက်လိုက်မှုနှင့်အောက်တွင်-အစီရင်ခံဖို့ကျရောက်နေတဲ့မှတ်မိဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကြှနျုပျတို့သညျ "ဘုံအခက်အခဲများ" အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာများကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်အစီရင်ခံဘက်လိုက်မှု minimize လုပ်ဖို့ရှာသောအခါ , သိမြင်မှုပစ္စည်းများ pretesting အားဖြင့် နှင့်ကွန်ပျူတာ-ကူညီ Self-သူများအားအင်တာဗျူးကို အသုံးပြု. .
ကျွန်ုပ်တို့၏ data တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာတွေကဒီအသက်အရွယ်အုပ်စုအဆန်းမဟုတ်ပြသပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာများကိုသတင်းပို့ 16 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အားလိင်တက်ကြွ 21- ၏အချိုးအစား၏ခန့်မှန်းချက်အမြိုးသမီးမြားအဘို့အမြိုးသား, အ 3% များအတွက် 41.6% တစ်ခုလုံးကို Natsal-51.2 လူဦးရေသည်ထက်အများကြီးနိမ့်မဟုတ် ။ အများအပြားကလူဦးရေ-based လေ့လာမှုများအငယ်အသက်အရွယ်အုပ်စုများအပေါ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သတင်းပို့ကြပါပြီ , ,  နှင့်  နှိုင်းယှဉ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပြင်းထန်မှု၏စစ်တမ်းနည်းစနစ်များနှင့်အမျိုးအစားထဲမှာအပြောင်းအလဲအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ပေမယ့်။ မကြာသေးမီကကနေဒါလေ့လာမှု ဥပမာ, ငယ်, nonrandom နမူနာချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကွဲပြားခြားနားမှုသတိထားဘို့လိုအပ်ကြောင်းအကြံပြုပေမယ့် 50 16 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အားလိင်တက်ကြွ 21- ၏% ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာအစီရင်ခံ, ဘယ်သူကို၏တဝက်, ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲအစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိရ အနက်တွင်။ လုလင်တို့သည်အနက် erectile အခက်အခဲများဘို့ငါတို့ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းချက် (7.8%) 4.3 နှစ်အရွယ်မှလိင်တက်ကြွ 16- တစ်ဦးသြစတြေးလျလေ့လာမှုမှာတွေ့ရတဲ့ 19% အကြားတစ်ဝက်တစ်ပျက်ဖြစ်ပါတယ်  နှင့်ပေါ်တူဂီအတွက်လေ့လာမှုမှာ 11 နှစ်အရွယ်မှလိင်တက်ကြွ 16- ကြားတွင် 24% ။ အစောပိုင်းသုတ်ရည်လွှတ်ဘို့အ 13.2% ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ခန့်မှန်းသြစတြေးလျလေ့လာမှု (15.3%) ထက်အနည်းငယ်နိမ့်နှင့်ပေါ်တူဂီလေ့လာမှု (40%) ထက်အများကြီးနိမ့်သည်။ အမျိုးသမီးငယ်တွေထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်း (22%) နှင့်အော်ဂဇင် (21.3%) သို့ရောက်ရှိအတွက်အခက်အခဲဘို့ငါတို့ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းချက် (အသီးသီး 36.7% နှင့် 29%) သြစတြေးလျလေ့လာမှုမှာသူများထက်အနည်းငယ်နိမ့်ဖြစ်ကြပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20% ၏နှုန်းထားများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆွီဒင်လေ့လာမှုမှာ 27% 18-24 နှစ်ပေါင်းအသက် .
လူငယ်များတွင်ပြproblemsနာအချိုးအစားမှာ“ လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှု” မှပေါ်ထွက်လာပြီးလူငယ်များသည်ယုံကြည်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံရလာသည်နှင့်အမျှအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပျောက်ကွယ်သွားမည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ ဒါကို O'Sullivan et al ။  လူငယ်များတွင်ပိုမိုကြာရှည်သောလိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော erectile လည်ပတ်မှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအပေါ်ပိုမိုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုတို့နှင့်ဆက်နွှယ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ လိင်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများရှိသောလူကြီးများသည်ရာသက်ပန်ရောဂါလက္ခဏာများကိုဖော်ပြခြင်း၊ တစ်နည်းပြောရလျှင်၊ သူတို့၏လိင်မှုဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်အချိန်တွင်မတိုင်မီပေါ်ပေါက်လာသောလက္ခဏာများနှင့်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိသေးပါ။  နှင့် ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်းများစွာကိုကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ပုံဖော်ထားသည်။ ၎င်းတို့တွင်လိင်ပညာရေးကိုမလုံလောက်ခြင်း၊ လိင်အကြောင်းပြောဆိုရန်အခက်အခဲ၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်လိင်၏တိမ်းညွတ်မှုသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးခြင်းသို့မဟုတ်အရှက်ကွဲခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများလည်းဥပမာ, အမြိုးသမီးမြားနာကျင်မှုကိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့သင့်ကြောင်းတစ်ခုလက်ခံမှုတင်းကျပ်နှင့်ကျားလူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်း၏နယ်နိမိတ်အတွင်းအပြုသဘောလိင်အောင်မြင်ရန်တိုက်ပွဲကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ ။ အမြိုးသမီးမြားဆင်ဆာနှင့်လူတို့၏မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်အကျိုးခံစားနေကြမထွက်ရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံယဉ်ကျေးမှုအပြောင်းအလဲအထူးသဖြင့်ခံနိုင်ရည်ပေါ်လာသော မကြာသေးခင်သုတေသနလူငယ်များမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးတွင်ဤယဉ်ကျေးမှု script များသိမ်းသွင်းသောအတိုင်းအတာအတွက်အပြောင်းအလဲအကြံပြုပေမယ့် .
Fine နှင့် McClelland တို့၏စာစီစာကုံး မှစ၍ ၂၅ နှစ်ကျော်  လိင်ပညာရေးအတွက်အလိုဆန္ဒ၏ပျောက်ဆုံးနေဟောပြောချက်ရက်တွင်လူငယ်များလိင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်နှင့်စပ်လျဉ်းသူတို့ရဲ့အသိပညာတစ်ခုကွာဟမှုရိပ်မိဖို့ဆက်မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးစီမံခန့်ခွဲရန်နေမကောင်းတပ်ဆင်ထားတဲ့ feeling သတင်းပို့ပါ။ Natsal-3 ဒေတာယောက်ျား၏ 42% အကြံပြုနှင့်အမျိုးသမီး၏ 47% သူတို့ပထမဦးဆုံးနီးပါးကိုယောက်ျား၏ 20% နှင့်သူတို့မသိခဲ့ကြစေလိုကြောင်းသူကိုအမျိုးသမီးတွေ 15% အပါအဝင်လိင်ရှိသည်ဖို့အဆင်သင့်သလိုခံစားရတယ်အချိန်တွင် psychosexual သည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုလူသိများခဲ့သောဆန္ဒရှိ လိင်ပိုပြီးကျေနပ်စရာအောင်ဘယ်လို ။ အလားတူပင်, နယူးဇီလန်ကနေရောထွေးနည်းလမ်းလေ့လာမှုအတွက် 16-19 နှစ်ပေါင်းအသက်ကျောင်းသားများကိုသူတို့ကျောင်းကလိင်အတွက်အကြောင်းပိုမိုသိရန်လိုကြောင်းထိပ်ဆုံးငါးအကြောင်းအရာများအကြား "နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်များအတွက်လိင်ကိစ္စလှုပ်ရှားမှုပိုပြီးပျော်စရာအောင်ဘယ်လို" နှင့် "ဆက်ဆံရေးအတွက်စိတ်ခံစားမှု" အဆင့် ပညာရေး ။ လူငယ်များသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုနှစ်သက်, လိင်ဆက်ဆံဖို့ nonpenetrative အခြားနည်းလမ်းများနှင့်ပါဝါဆက်ဆံရေးအကြောင်းပြောဆိုချင်ဟုပြောနေစဉ်, ကျောင်းကလိင်ပညာရေး, ဤအကြောင်းအရာများလစျြလြူရှုလေ့, အကြောင်းအရာအစားအခွင့်အာဏာအတွက်လူကြီးများ၏အကာအကွယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများထင်ဟပ် .
လိင်ပညာရေးကိုနှစ်သက်၏ပါဝင်မှုများအတွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအသစ်များကိုမဟုတ် ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်တွင်တိတ်ဆိတ်ပညာပေးရင်းမြစ်များမှကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းထိုကဲ့သို့သောမိတ်ဆွေများနှင့်မီဒီယာများကဲ့သို့သောအခြားသတင်းရပ်ကွက်များကဖြည့်လျက်ရှိ၏ နှင့် Natsal-3 သည်နှင့်အညီ, လူပျို၏နီးပါးလေးပုံတစ်ပုံလိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်များ၏သူတို့၏သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးအဖြစ်ညစ်ညမ်းကိုးကား ။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏လိင်ဘဝအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရိပ်မိပေမယ့် , ညစ်ညမ်းငယ်ရွယ်လူတို့တွင်လိင်ဆက်ဆံမှု၏လက်တွေ့နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောမျှော်လင့်ချက်များဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ , အလားအလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာများကိုပိုမိုဆိုးဝါး။ လိင်ပညာရေး, ဒဏ္ဍာရီ debunk တာလုပျဆောငျအပျော်အပါးဆွေးနွေးရန်, ကျား, မသာတူညီမျှဆက်ဆံရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေရပ်တန်မှဆက်ဆံရေးအတွင်းမှာဆက်သွယ်ရေးနှင့်ရိုသေလေးစားမှု၏သော့အခန်းကဏ္ဍအလေးပေးပြောကြားနိုင်ပါတယ်။
အကူအညီနဲ့သို့မဟုတ်အကြံဉာဏ်ကိုရှာသောသူစိတ်ပျက်စရာပြဿနာများနှင့်အတူလူငယ်များ၏အနိမ့်အချိုးအစားဖြစ်ကောင်း unsurprising ဖြစ်ပါတယ်။ အကူအညီရှာပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာများနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူတို့တွင်အဆန်းဖြစ်တယ် ။ လိင်ပညာရေးသိကျွမ်းခြင်း၌ကွာဟချက်တွေ့ဆုံနေဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, (1) ဖြေရှင်းရန်တာလုပျဆောငျနိုငျဘဲ, (2) ပြဿနာများကိုဘုံနှင့်တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းလူငယ်များဖှယျအားဖွငျ့၎င်းငျး, နှင့် (3) လူငယ်ဖော်ရွေန်ဆောင်မှုများပေးရန်လင့်များခိုင်ခံ့စေခြင်းဖြင့်။ providers, အလှည့်၌, (ထိုကဲ့သို့သောဓတေားနှင့်ကာလသားစမ်းသပ်ခြင်းကဲ့သို့) ကိုအခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်မတက်ရောက်လူငယ်များမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုဆက်စပ်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူရုန်းကန်နေစေခြင်းငှါသတိပြုမိဖို့လိုတယ်။ ဤစိုးရိမ်မှုများ၏ပျံ့နှံ့မှုပေးပံ့ပိုးပေးမယ့်စံလူနာသမိုင်းအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအကြောင်းကိုတောင်းဆွေးနွေးမှုစတင်ရန်ထိုသို့သင့်လျော်သောဖြစ်စေခြင်းငှါ, အနာဂတ်လေ့လာမှုများကဒီချဉ်းကပ်မှု၏အသုံးဝင်မှုအကဲဖြတ်ရန်ပေလိမ့်မည်။
လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ကောင်းကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအချက်အလက်မရှိပါက၎င်းတို့၏လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်မှန်းဆ။ သာဖြစ်နိုင်သည်။ လူငယ်များကို ဦး တည်သောပြresearchနာများ၊ သူတို့၏ခံယူချက်နှင့်ဆိုးကျိုးများကိုစူးစမ်းသောနောက်ထပ်သုတေသနပြုရန်အရေးတကြီးလိုအပ်နေသည်။ အထူးသဖြင့်လူငယ်များ၏ပြtoနာများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောမှန်ကန်သောတိုင်းတာရေးကိရိယာများလိုအပ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူ ဦး ရေ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာကိုတိုးတက်လိုပါက ၄ င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များကိုစတင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စုံတွဲများနှင့်ဆက်သွယ်သင့်သည်၊ အသိပညာ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အရှက်တကွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုရာသက်ပန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များသည်ဤကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်ခိုင်မာသောပင်ကိုယ်မူလတွန်းအားကိုပေးသည်။
Natsal-3 သည် London College London (London, UK)၊ London London of Hygiene and Tropical Medicine (London, UK)၊ NatCen လူမှုသုတေသန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအင်္ဂလန် (ယခင်ကကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအေဂျင်စီ) နှင့်မန်ချက်စတာတက္ကသိုလ်တို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည်။ (မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) ။ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သူများသည်လေ့လာမှု၏ဒီဇိုင်းနှင့်အပြုအမူတွင်မည်သည့်အခန်းကဏ္ had မှပါ ၀ င်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်း၊ နှင့်ဆောင်းပါးပြင်ဆင်မှု, ပြန်လည်သုံးသပ်သို့မဟုတ်အတည်ပြု; နှင့်ထုတ်ဝေရန်ဆောင်းပါးတင်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်။ စာရေးသူသည် NatCen Social Research မှလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများ၊ NatCen လူမှုသုတေသနမှအင်တာဗျူးသူများအဖွဲ့၊ စစ်ဆင်ရေးနှင့်ကွန်ပျူတာဝန်ထမ်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကို (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီထံမှထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်G0701757) နှင့် Wellcome Trust မှ (084840), စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးသုတေသနကောင်စီနှင့်ကျန်းမာရေး ဦး စီးဌာနထံမှပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူ။ ၂၀၁၅ စက်တင်ဘာ လမှစ၍ KRM ကိုယူကေဆေးပညာသုတေသနကောင်စီ (MRC) မှအဓိကထောက်ပံ့သည်။ MRC / CSO လူမှုရေးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဌာန၊ ဂလပ်စ်ဂိုတက္ကသိုလ် (MC_UU_12017-11).
'ကျောင်းမှာကျုပ်တို့မဖုံးခဲ့ဘူး' - ပျော်ရွှင်မှုကိုဆန့်ကျင်သောပညာရေးလော၊
လိင်ပညာရေး,5(2005), စစ။ 375-388
မှန် CT Halpern
ဘဝသင်တန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ကျန်းမာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုး: ဆယ်ကျော်သက်လိင်အပေါ်သုတေသနပြု Reframing
လိင် Reprod ကျန်းမာရေး, 42 (2010), စစရှုထောင့်။ 6-7
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စံချိန်စံညွှန်းလိင်ဖှံ့ဖွိုးတိုး: ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်တစ်ဦးကဆယ်စုနှစ်, 2000-2009
J ကို Res မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, 21 (2011), စစ။ 242-255
အယ်လ် Hillier, အယ်လ် Harrison
Homophobia, အရှက်ကွဲများ၏ထုတ်လုပ်မှု: လူငယ်များနှင့်အတူတူပင်လိင်ဆွဲဆောင်မှု
အစွန်းရောက်ကျန်းမာရေးလိင်,6(2004), စစ။ 79-94
C. Marston, R. Lewis ကတော့
ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်လူငယ်များနှင့်သက်ရောက်မှုတွေအကြားစအို heterosex: ဗြိတိန်အတွက်တစ်ဦးကအရည်အသွေးလေ့လာမှု
BMJ Open,4(2014), p ။ e004996
br J ကို Sociol, 61 (2010), စစ။ 737-756
အပျော်အပါးအပေါ်တစ် ဦး အာရုံစူးစိုက်? လူငယ်များနှင့်အတူအုပ်စုလိုက်အလုပ်၌အလိုဆန္ဒနှင့်ရွံရှာခြင်း
အစွန်းရောက်ကျန်းမာရေးလိင်, 17 (ပျော့ပျောင်း။ 2) (2015), စစ။ S223-S375
(5th တည်းဖြတ်ခြင်း) ရေးသားသူ, Arlington, VA (2013)
ခTræen, အိပ်ချ် Stigum
Scand J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး, 38 (2010), စစ။ 445-456
ဂျေရစ်ချတာ, AE Grulich, ro က de Visser, et al ။
Aust နယူးဇီလန် J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး, 27 (2003), စစ။ 164-170
အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ - ရောဂါကူးစက်မှုဆိုင်ရာချဉ်းကပ်နည်း
int J ကိုသင်ျခြို Res, 16 (2004), စစ။ 261-269
18 နှစ်ယောက်ျားအသက် 70 တစ် stratified နမူနာကိုအသုံးပြုပြီးလူဦးရေ-based လေ့လာမှုရလဒ်များ: ပေါ်တူဂီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏ပျံ့နှံ့
အဆိုပါ J ကိုလိင် Res, 51 (2013), စစ။ 13-21
LF O'Sullivan, LA Brotto, ES Byers, et al ။
J ကိုလိင် Med, 11 (2014), စစ။ 630-641
N. Escajadillo-Vargas, အီး Mezones-Holguín, ဂျေကက်စထရို-ကက်စထရို, et al ။
အဆိုပါ J ကိုလိင် Med, 8 (2011), စစ။ 1701-1709
A. အ Philpott, ဒဗလျူ Knerr, ဃ Maher
The Lancet, 368 (2006), စစ။ 2028-2031
ဂျေအေ Higgins, JS Hirsch က
အဆိုပါအပျြောအပါးလိုငွေပြမှု: မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအတွက် "လိင် connection ကို" ပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်
လိင် Reprod ကျန်းမာရေး, 39 (2007), စစရှုထောင့်။ 240-247
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး defining: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်တစ်ဦးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေး၏အစီရင်ခံစာ, 28-31 ဇန်နဝါရီလ 2002
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO, ဂျနီဗာ (2006)
DJ သမား Hensel, JD Fortenberry
J ကို Adolesc ကနျြးမာရေး, 52 (2013), စစ။ 219-227
K. ကောင်းစွာ, Am ဂျွန်ဆင်
ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet, 382 (2013), စစ။ 1759-1762
လိင်ပညာရေး,6(2006), စစ။ 393-402
, CA ဂရေဟမ်, R. Crosby သည်, WL Yarber, et al ။
လိင်ကျန်းမာရေး,3(2006), စစ။ 255-260
KR Mitchell က CH ဟာမာ, GB ကို Ploubidis, et al ။
ဗြိတိန်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ၏တတိယအမျိုးသားရေးစစ်တမ်းကနေတွေ့ရှိချက်များနှင့်လူနေမှု (Natsal-3)
ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet, 382 (2013), စစ။ 1817-1829
LA ကဖြစ်သူ Scott-Sheldon, BT ဂျွန်ဆင်
J ကို Prim Prev, 27 (2006), စစ။ 619-640
အယ်လ် Allen က
'မင်းတို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လိင်မဆက်ဆံသင့်ဘူးလို့သူတို့ထင်တယ်' '- လိင်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများတိုးတက်စေရန်လူငယ်များ၏အကြံပြုချက်များ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, 11 (2008), စစ။ 573-594
ခ Erens, အေ Phelps, အက်စ် Clifton, et al ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်လူနေမှု၏တတိယဗြိတိန်အမျိုးသားရေးစစ်တမ်း (Natsal-3) ၏နည်းစနစ်
လိင် Transm Infect, 90 (2014), စစ။ 84-89
အမ် Gray, အက်စ် Nicholson
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်လူနေမှု 2010 အမျိုးသားစစ်တမ်း: သိမြင်မေးခွန်းတစ်ခုကိုစမ်းသပ်ရာမှတွေ့ရှိချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များ; 2009
CH မာ, C. Tanton, P. Prah, et al ။
ဘဝသင်တန်းမှတစ်ဆင့်နှင့်အချိန်ကျော်ဗြိတိန်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်လူနေမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ၏အမျိုးသားရေးစစ်တမ်းများကနေတွေ့ရှိချက်များနှင့်လူနေမှု (Natsal)
ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet, 382 (2013), စစ။ 1781-1794
KR Mitchell က, GB ကို Ploubidis, ဂျေ Datta, et al ။
အဆိုပါ Natsal-SF: အသိုင်းအဝိုင်းစစ်တမ်းများအတွက်အသုံးပြုရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတစ်အတည်ပြုအတိုင်းအတာ
EUR J ကို Epidemiol, 27 (2012), စစ။ 409-418
BS Christensen, အမ် Gronbaek, အမ် Osler, et al ။
ဒိန်းမတ်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်အခက်အခဲများ: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ် sociodemographic အချက်များ
Arch လိင်ပြုမူနေ, 40 (2011), စစ။ 121-132
A. အ Burri, T. Spector
J ကိုလိင် Med, 8 (2011), စစ။ 2420-2430
အီး Kaschak, အယ်လ် Tiefer
Routledge, နယူးယောက် (2014)
GS Bordini, TM အလိုအလျောက် Sperb
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံ: 2001 နှင့် 2010 အကြားစာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု
လိင်သတ်ဖို့, 17 (2013), စစ။ 686-704
NT မာစတာ, အီးကာဇီ, EA ၏ဝဲလ်, et al ။
ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲတက်ကြွအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ: အဆက်မပြတ်အပြောင်းအလဲ
J ကိုလိင် Res, 50 (2013), စစ။ 409-420
အမ် Fine, အက်စ် McClelland
Harv Education ဗြာ, 76 (2006), စစ။ 297-338
C. Tanton, KG ဂျုံးစ်, ဒဗလျူ Macdowall, et al ။
BMJ Open,5(2015), p ။ e007834
လိင်နှင့် ပတ်သက်. အမှန်တကယ်ရယူပါ: လိင်ပညာရေး၏နိုင်ငံရေးနှင့်အလေ့အကျင့်
McGraw-Hill ကပညာရေး (ဗြိတိန်), Maidenhead (2007)
အယ်လ် Allen က, အမ် Carmody
Re-သွားရောက်လည်ပတ်လိင်ပညာရေးကိုနှစ်သက်၏အလားအလာ: 'ပျော်ရွှင်မှုမရှိ, နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိပါတယ်' '
လိင်ပညာရေး, 12 (2012), စစ။ 455-468
GM က Hald, မိုင် Malamuth
Arch လိင်ပြုမူနေ, 37 (2008), စစ။ 614-625
ကောင်းသောလိင်ကဘာလဲ ?: လူငယ်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို [Ph.D ဘွဲ့ကို စာတမ်း]
KR Mitchell က, KG ဂျုံးစ်, K. ကောင်းပြီ, et al ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြဿနာများ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုခနျ့မှနျး: ရောဂါသတ်မှတ်ချက်များ၏သက်ရောက်မှု
J Sex Res (2015), စစ။ ၁-၁၃ [Epub ရှေ့တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ ]
အကျိုးစီးပွား၏ပဋိပက္ခ: AMJ အဆိုပါ Wellcome Trust ၏တစ်ဦးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသည်အခြားစာရေးဆရာများသူတို့အကျိုးစီးပွားအဘယ်သူမျှမပဋိပက္ခများရှိသည်သောကြေညာ။
Kirstin R. Mitchell က, Ph.D ဘွဲ့ကို, အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေက / CSO လူမှုရေးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံယူနစ်, ကျန်းမာရေးနှင့်သာယာဝပြောရေး၏ Institute မှ, Glasgow တက္ကသိုလ် 200 Renfield လမ်း, Glasgow, Scotland G2 3QB, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း: လိပ်စာစာပေးစာယူ။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာ 2016 Society က©။ Elsevier Inc ကိုထုတ်ဝေသည်
မှန်ကန်သောသက်သေများသည်စာရေးသူ၏အမှားများပါသည့်စာနယ်ဇင်းဆောင်းပါးများဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးကိုးကားချက်အသေးစိတ်များ၊ ဥပမာ၊ အသံအတိုးအကျယ်နှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်ပေးသောနံပါတ်၊ ထုတ်ဝေသည့်နှစ်နှင့်စာမျက်နှာနံပါတ်များကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပြီးနောက်ဆုံးစာစောင်မတိုင်မီစာသားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
မှန်ကန်သောသက်သေအထောက်အထားများတွင်ရှိသည့်ကျမ်းစာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးမရသေးသော်လည်းအွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည့်နှစ်နှင့် DOI ကိုအောက်ပါအတိုင်းကိုးကားနိုင်သည်။ စာရေးသူ (များ)၊ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှု (နှစ်), DOI ။ ဤအရာများအတိအကျပေါ်လာခြင်း၊ ဂျာနယ်အမည်များ၏အတိုကောက်နှင့်ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်သုံးခြင်းအတွက်ဂျာနယ်၏ရည်ညွှန်းပုံစံကို ကျေးဇူးပြု၍ တိုင်ပင်ပါ။
နောက်ဆုံးဆောင်းပါးပြည်သူများ၏ volumes ကို / ကိစ္စများမှတာဝန်ပေးအပ်အခါစာနယ်ဇင်းဗားရှင်းအတွက်အပိုဒ်ဖယ်ရှားမည်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဗားရှင်းဆက်စပ်ထုတ်ဝေ volumes ကို / အများပြည်သူ၏ကိစ္စများပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဆောင်းပါးပထမဆုံးအွန်လိုင်းရရှိနိုင်ခဲ့ရက်စွဲကျော်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။